पिता नभएकालाई सोध, बुबाको महत्त्व के हो ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
August 30, 2019 Nepal E News
बुबा’ यत्ति सम्बोधनले तपाईंको मानसपटलमा कस्तो आभास हुन्छ ? तपाईंले भन्ने उत्तर, ‘मेरो आदर्श’, ‘मेरो पथप्रदर्शक’, ‘मेरो प्रगतिको कारक’, ‘मेरो हौसलाको स्रोत’, ‘मेरो असल साथी’…यस्तै यस्तै धेरै । तपाईंले अहिले सिक्नु भएको सबै श्रेय आफ्नो बुबालाई नै जान्छ । आमाको ममताबाट हुकिर्ने बालक बुबा संर्घष हेर्दै अघि बढ्छ । त्यसैले त बुबाको अर्थ यो ‘ब्रम्हाण्ड’भन्दा व्यापक छ ।
जीवनशैलीपिता नभएकालाई सोध, बुबाको महत्त्व के हो ?
१३ वर्षदेखि तीन लाख किलो रक्तचन्दन ‘डम्पिङ’
विवाहको नाममा नेपाली चेली चीनमा तस्करी, ४ चिनियाँ सहित १० जना पक्राउ